असान्जको गिरफ्तारी इतिहासको चेतावनी - Jhilko
असान्जको गिरफ्तारी इतिहासको चेतावनी
जुलियान असान्जको गिरफ्तारीले अमेरिकी सत्ता र त्यसको आडमा रहेको साम्राज्यवादी सत्ताका विभिन्न सञ्जालको आवरणभित्र लुकिरहेको जालझेल, षडयन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा विभिन्न देशको सार्वभौम सत्तामाथि हैकम जमाउन गरिरहेको ताण्डवको तानाबानालाई च्यातचुत पारिदिएको छ ।
अमेरिकाका प्रमुख दुबै पार्टी रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सभित्र भुँइचालो ल्याइदिएको छ ।
कुनैबेला असान्जको खुलासालाई राम्रो भनी पटकपटक टिप्पणी गरी चुनाव जितेका अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि रूझेको बिरालो जस्तो भएका छन् ।
असान्जको गिरफ्तारीका बेला टम्पले यसबारे केही जान्दिन र यो मेरो समयमा भएको विषय पनि होइन भनेर ट्विट गरे ।
तर, यसो भन्नु पनि ट्रम्पका लागि गाह्रो भएको देखिएको छ । ट्रम्पले यतिसम्म भन्नु पनि अमेरिकाको साम्राज्यवादी सत्ताका लागि गाह्रो भएपछि उसले ट्रम्पमाथि तत्काल दबाब दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ‘ह्वाइट हाउस’की प्रवक्ता सारा स्यान्डर्सले ट्रम्पले विगतमा भनेका असान्जका खुलासाहरूबारे गरेका टिप्पणीहरू चुनावी अभियानका फगत चुटकिलाहरू मात्र भएको बताएकी छिन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवादी सत्ताले असान्जलाई देशद्रोही झैं ट्रम्पले पनि असान्ज देशद्रोही हुन भन्ने सन्देश प्रवक्ता स्यान्डर्सले दिएकी छिन् ।
सन् २०१६ मा ट्रम्पले असान्ज र उनका विकिलिक्सका खुलासाहरूलाई ‘प्रेमको खजाना’ भनेका थिए र उनीहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
अमेरिकी साम्राज्यवादी सत्ताले असान्जमाथि अमेरिकी कम्प्युटरलाई ह्याक गरी सूचना चोरेको आरोप लगाएको छ । असान्जले इराक युद्धमा अमेरिकाले कसरी आमनागरिकको हत्या गरेको थियो त्यसको भिडियो र त्यससम्बन्धी कागजातलाई सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेपछि उनलाई पक्राउ गर्न आफ्ना सहयोगी देशहरूमाथि दबाब दिएको थियो । असान्जले अमेरिका सुपुर्दगी हुनबाट जोगिन बेलायतस्थित इक्वेडरको दूतावासमा राजनीतिक शरणार्थीको रूपमा शरण लिन पुगेका थिए । इक्वेडरले पछि उनलाई त्यहाँको नागरिकता समेत दिएर जोगाउने प्रयास गरेको थियो । तर अमेरिकी सत्ताको इशारामा चल्ने इक्वेडरका नयाँ राष्ट्रपतिले उनलाई दिएको शरणार्थीको हैसियत फिर्ता लिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लंघन गरी बेलायती प्रहरीले लन्डनस्थित इक्वेडरको दूतावासमा छिरेर शरण लिएर बसेका असान्जलाई लछारपछार गर्दै बाहिर ल्याएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दृश्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा देखियो । यो दृश्यले अधिकार विरूद्ध शक्ति, कानुन विरूद्ध बाहुबल, उत्साह विरूद्ध अभद्रता प्रदर्शन भएको दर्शायो । करिब ७ वर्षदेखि खुला आकाशको घामको अनुभव नलिएका एक कमजोर पत्रकारलाई छ जना प्रहरीले हातपात गरी बाहिर निकालेको यो दृश्य इतिहासको एक चेतावनी बन्न पुगेको छ ।
म्यागना कार्टाको भूमि लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट सुरक्षित एवं संरक्षित राजनीतिक शरणार्थीको दर्जा पाएका पत्रकार असान्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हस्ताक्षरकर्ता बेलायतले गिरफ्तार गरेको छ । सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पालना गर्ने जिम्मेवारीलाई फोहरको बाकसमा मिल्काएर ट्रम्प प्रशासनको निर्देशन पालना गरी बेलायतले अमेरिकी सत्ताको पंक्तिमा आफूलाई उभ्याएको छ । बेलायतका कुलीनहरूले निष्पक्षता र न्यायको आफ्नो अन्तिम नैतिक सूत्र वाक्यलाई पनि परित्याग गरेका छन् ।
यसो नगरे बेलायतीहरूले लन्डनको कनाट स्क्वाएरस्थित करोडौं पाउन्ड स्टर्लिंगको घरबाट आफ्ना पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई हतकडी लगाइ हेगमा उभ्याउनु पर्ने थियो । त्यसो नगरी उनीहरूले एक पत्रकारलाई हतकडी लगाउन पुगे । ब्लेयरको अपराध निर्दाष इराकीहरूको हत्या हो ।
असान्जको अपराध पत्रकारिता हो, उनले असत्य, जालझेल गरी सत्ता टिकाउनेहरूको अपराधलाई विश्वका जनताका बीचमा सार्वजनिक गरी आम जनतालाई सशक्त पार्ने काम गरेको अपराध गरेका हुन् । ओस्कर वाइल्डले सभ्यताको उन्नतिका लागि असन्तुष्टिको बिउ छर्नु भनेर दिएको चेतावनीलाई आफूलाई लोकतन्त्रको जननी भनेर दाबी गर्ने बेलायती सरकारले अनदेखा गरेको छ । ओस्कर वाइल्डको यो सन्देश पत्रकारहरूका लागि विशेष महत्वको रहेको छ । विकिलिक्सका संस्थापक सम्पादकलाई भएजस्तै जुनसुकै पत्रकारलाई जुनसुकै बेला हुन सक्ने चेतावनी यो हो ।
असान्जलाई सबैभन्दा बढी दुख दिने काम ‘द गार्जिएन’ले गरेको देखिएको छ । कुनै बेला असान्जका खुलासाहरूलाई ३० वर्ष यताको सबैभन्दा ठूलो ‘स्कूप’ भनेर प्रमुखता साथ समाचार छापेको द गार्जिएनले असान्जका बारेमा झूठको पुलिन्दा छाप्न थालेको छ । अहिले द गार्जिएनको बोली फेरिएको छ ।
असान्जले गुप्त भिडियो र कागजातहरूले अमेरिकाले उपनिवेश बनाउन गर्ने युद्धहरू, बेलायतको विदेश कार्यालय गर्ने झूटको खेती, मध्यपूर्वमा युद्ध चर्काउन हिलारी क्लिन्टनको भूमिका, सिरिया र भेनेजुएलामा सत्ता पलटका विषयहरूलाई खुलासा गरेकोमा शंका छैन । यी सबै विषय अझ विकिलिक्सको साइटमा उपलब्ध भइरहेको छ ।
द गार्जिएनले मात्रै होइन न्यूयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्टलगायतले विकिलिक्सका समाचारहरूलाई व्यापकरूपमा प्रकाशित गरेका थिए । तर उनीहरू अहिले सुस्त भएको देखिएका छन् । जसले समाचार छापेका छन् उनीहरू विरूद्ध कुनै कारबाही गरिएको छैन् ।
“जनताको जान्न पाउने अधिकार, प्रश्न गर्न पाउने अधिकार र सत्तालाई चुनौती दिन पाउने अधिकार नै साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हो ।”
असान्जको गिरफ्तारीपछि लोकतन्त्रको यो बुझाइ लुटिएको छ । असान्जसँग व्यक्तिगतरूपमा सहमत असहमत हुनु अर्को विषय हो तर उनलाई जुन आधारमा पक्राउ गरी सजाय दिन खोजिएको विषयमा यो लोकतान्त्रिक बुझाइको आधारमा विमति जनाउन सकिने ठाउँ भने देखिदैन् ।
यस सन्दर्भमा सन् २०२० मा अमेरिकाको राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने अभियानमा रहेकी डेमोक्रेट्स नेतृको बुझाइ सही रहेको देखिन्छ । तुल्सी गब्बार्डले असान्जको गिरफ्तारीको विरोध गरेकी छिन् । उनले अमेरिकी सरकारले असान्जलाई सुपुर्दगी गर्न लगाइ सजाय दिन बनाएको योजना पारदर्शिता र स्वतन्त्र प्रेसका लागि ठूलो धक्का भएको बताएकी छिन् । असान्जलाई पक्राउ गरी सजाय दिनु पत्रकारहरूका लागि खतरनाक अवस्था सिर्जना गर्दै तुल्सीले असान्जको सुपुर्दगी प्रयासको विरोध गरेकी छिन् ।
तर सबै तुल्सी भने अमेरिकामा मात्रै होइन उनकै डेमोक्रेट्स पार्टीमा पनि नभएको देखिएको छ । यसअघि हिलारी क्लिन्टनसँगको प्रतिस्पर्धामा यसअघिको राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्ने दौडमा पराजित भएका र यो वर्ष प्रतिस्पर्धामा रहेका बर्नी स्यान्डर्सले अहिलेसम्म असान्जको बारेमा आफ्नो मुख थुनी राखेको देखिएको छ ।
स्यान्डर्सले असान्जको पक्षमा बोल्न मौकाको पर्खाइमा बसेको हुन सक्छन् वा ट्रम्पले अमेरिकी सत्ताबाट पाएको दबाब जस्तै दबाब पाएको हुन सक्ने देखिएको छ ।
चुनावका बेला एक सय ४० पटक भन्दा बढी ‘विकिलिक्स राम्रो’ भनेर चुनाव जितेका विश्वकै सर्वाधिक शक्तिशाली देशका राष्ट्रपति ट्रम्पको हैसियत तथा मुख थुनेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने स्यान्डर्सले मनोनयनको सुनिश्चितताको खोजीमा रहेको छ ।
असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गरी मुद्दा चलाइनेछ । अमेरिकाले लगाएको अभियोग अनुसारको मुद्दामा उनी दोषी ठहर गरिए उनलाई पाँच वर्षको कैद हुने छ । तर अमेरिकाको कानुन विभागले उनलाई त्यसै उम्किन दिने योजनामा नरहेको देखिएको छ । थप अभियोग लगाउने मनसायका साथ अमेरिकाको न्याय विभागले असान्जको सुपुर्दगीका लागि न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको देखिएको छ । विश्वकै सर्वाधिक शक्तिशाली देशको सत्ताको सञ्चालकहरूलाई उनीहरूको मुखमा निर्दोष मानिसको रगत लागेको खुलाइ दिने काम असान्जले गरिदिएका छन् ।
लोकतन्त्र र शान्तिको वकालत गर्दै आएको अमेरिकी सत्ताको पोल खोल्नेलाई त्यसै छोडनु आफ्नो आचरणको पालना त्यहाँको साम्राज्यवादीहरू गरिरहेको बेला लोकतन्त्र, पारदर्शीता र स्वतन्त्र प्रेसका अभियन्ताहरूले एक न्यूनतम पंक्तिलाई धारिलो बनाउने बेला होइन र ? असान्जको गिरफ्तारी इतिहासको चेतावनी होइन र ?
को हुन् जुलिएन एसान्ज ? के थियो उनीमाथिको अभियोग ?
दुर्घटनामा जोगिए मुख्यमन्त्री भट्ट
नेपालद्वारा चीन पाँच रनले पराजित
नेपालले चीनलार्ई पराजीत गर्दै आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत एशिया...
सिरहाका दुई जना प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण
प्रहरी उपरिक्षकको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी हवल्दार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सबारी...
गोरखापत्र संस्थानमा देखियो सुधारको संकेत
सूचना र समाचारको भरपर्दो र बिश्वसनीय सम्बाहक गोरखापत्र संस्थान सुध्रिदै गएको संकेत...